द्वन्द्वकालीन मुद्दा देशबाहिर नजाओस् - Worldnews.com
नेपालमा भएको माओवादी सशस्त्र विद्रोहले अन्तराष्ट्रियरूपमै आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वको मान्यता पाएको थियो । आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि जेनेभा महासन्धिका साझा धारा ३ आकर्षित हुन्छ भन्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्र सबैले स्वीकारेका छन् । यो महासन्धिले कुनै पनि बहानामा गैरसैनिक व्यक्ति र द्वन्द्वमा सरोकार नराख्ने वा
शहरी क्षेत्रमा मानिसको चाप बढ्दो छ । विशेष गरी काठमाडौंमा मानिसको चाप अत्यधिक भएको छ । दैनिक उपभोग्य सामग्रीको भाउले आकाश छोएको छ भने सँगसँगै कोठाभाडा तिर्न नसक्ने स्थितिमा...
News of Nepal 2018-12-12
१३ बर्षिया बालिकाको बलात्कारीलाई खुलाउन चाहदैन् ओली सरकार: नेतृ रमिता देउवा
ललित सिहं, बझाङ । १३ बर्षिया बालिका निर्मला पन्तको बलत्कार पछि हत्या गर्ने हत्यारालाई यो बर्तमान ओली सरकारले कारवार्हि गर्नको साटोउल्टै लुकार्य रहेको नेपाली काँग्रेसकी नेतृ...
News of Nepal 2018-11-28
गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा प्रमाण नष्ट भयोः नेतृ संग्रौला
महेश न्यौपाने, रोल्पा । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. डीला संग्रौलाले गृहमन्त्रीको निर्देशनमा निर्मला पन्त हत्याको प्रमाण नष्ट गरिएको वताएकी छिन । ंकंचनपुरमा हत्या...
News of Nepal 2018-12-03
डा. केसीले जनाए निर्मलाको परिवारप्रति ऐक्यवद्धता
मनोज भट्ट, महेन्द्रनगर । निर्मला पन्तको न्यायको खोजीमा उनको परिवारले सुरु गरेको अनिश्चितकालिन धर्नाप्रति डा. गोविन्द केसीले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । मङगलवार कञ्चनपुर आएका डा...
News of Nepal 2018-11-27
कन्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाका दोषी अहिलेसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । निर्मलालाई न्याय देऊ भन्दै देशव्यापीरुपमा आन्दोलन भएको पनि चार महिना...
विराटनगर । अखिल जनतान्त्रिक तराई मुक्तिमोर्चा विवेक समूहका चार जनाले हतियारसहित सरकारी वार्ता टोलीसमक्ष आज आत्मसमर्पण गरेका छन् । नेपालको संविधानको मूलधारमा रही काम गर्ने र...
विराटनगर । अखिल जनतान्त्रिक तराई मुक्तिमोर्चा विवेक समूहका चार जनाले हतियारसहित सरकारी वार्ता टोलीसमक्ष आज आत्मसमर्पण गरेका छन् । नेपालको संविधानको मूलधारमा रही काम गर्ने र समान्य जीवनयापन गर्ने उद्देश्यका साथ रामु कामैत भन्ने रामनन्दनकुमार कामैत, विनायककुमार यादव, विनोदकुमार यादव र जयप्रकाश लिचपुरिया छन् । उहाँहरुले तीन थान पेस्तोल वार्ता टोलीका संयोजक सोमनाथ पाण्डेललाई...
विकास र समृद्धिको नारा बोकेर सत्ता चलाएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नौ महिना बित्दासम्म पनि आफ्नो कार्यप्रगति केही देखाउन सकेको छैन । इतिहासकै बलियो र दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार म्यादी सरकारभन्दा भिन्न रहन सकेन । बरु त्योभन्दा निकम्मा साबित भएको छ । सरकार परिवर्तन भइरहँदा विकास भएन भन्नेहरुलाई अब कुनै सवाल रहेको छैन । स्थायी सरकार बन्दासमेत सरकार भएको र नभएको कुनै आभाष...
नेपालमा केही समयदेखि सुरक्षाको अवस्था कहालीलाग्दो भएको छ । विभिन्न स्तरका आपराधिक व्यक्ति, समूह वा जत्थाले समाजमा सामान्यदेखि गम्भीरतम् प्रकृतिसम्मका आपराधिक घटना घटाउँदै आएका छन् । कलिला बालिका बलात्कारदेखि लुटपाटसम्मका खबर आइरहनु राम्रो पक्ष होइन । निर्मलाका हत्यरा एकजना पक्राउ गरिएको भनिए पनि थप सत्यतथ्य आएको छैन । र, बलात्कार पनि रोकिएको छैन । अहिले अपराधका असामान्य...
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुरक्षा निकायलाई राज्यले तोकेको कामलाई जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गरी शान्तिसुरक्षालाई मजबुद बनाउन निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातीर्थ काठमाडौँमा सञ्चालित सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकको आधारभूत तालीमको आज दीक्षान्त समारोहमा गृहमन्त्री थापाले जनताप्रति समर्पित भई अनुशासित र...
जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका–११ स्थित बाल माध्यमिक विद्यालय, झाप्राका प्रधानाध्यापक पृथ्वीबहादुर सिंहले रजिस्ट्रेसन फर्म भर्न गएका कक्षा ९ का छात्र शेरबहादुर बस्नेतलाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरे । बालकको ओठ फुटेको तस्वीरसहित नाम उल्लेख गरी खबर सार्वजनिक भयो । बालबालिकाको मनोविज्ञान बुझेर व्यवहार गर्नुपर्नेमा रजिस्ट्रेसन फर्म भर्न गएका विद्यार्थीमाथि नै मरणासन्न हुने गरी...